Kubhadhara kwekutakura kwemaruva.
Nhasi pane nzira mbiri dzekubhadhara dzinowanikwa pakurongedza maruva:
1. Makadhi ebhangi
Unogona kubhadhara neVISA, VisaElectron, MasterCard, Maestro, MIR makadhi, uye nekuwedzera, nemakadhi epasi rese ekubhadhara masisitimu - VisaInternational, MasterCardInternational, DinersClubInternational, AmericanExpress.
Iyo odhiyo yekubhadhara interface iri nyore uye inonzwisisika:
Kubhadhara nemakadhi kunoitwa kuburikidza neyakagadziriswa nzira yekubhadhara "CloudPayments". Mukati memaminitsi gumi unogona kuramba kubhadhara odha. Kana iyo nguva yapfuura, uye usati waita sarudzo pane odha, ipapo iko kunyorera kuchamiswa.
PCIDSS Kuteedzera Chitupa "CloudPayments":
Pasina kutsauka kubva pane zvinodiwa nehurongwa hwepasi rose hwekubhadhara, kuti uwedzere mwero wekuchengetedza, tekinoroji yazvino inoshandiswa - 3D Yakachengeteka / YakachengetekaCode. Iwe unozadza fomu, simbisa kubhadhara kwako uchishandisa bhatani rakakosha uye wopinda kodhi inogamuchirwa kubva kuSMS mundima yakakodzera. Unogona kurambidzwa kubhadhara chete kana bhangi rako risina chitupa chekushandisa tekinoroji iyi.
Kana iwe uchida kuwana yakadzama dhata pamusoro pekubhadharwa kwemadhora nekadhi rako paInternet, kugadzirisa matambudziko nekubhadhara, fonera iyo yekutsigira bhangi sevhisi panhamba yakaratidzwa pakadhi.
2. Mari isina mari yemasangano epamutemo
Masangano epamutemo anobhadhara odha kubva kuaccount yazvino, zvinoenderana nema invoice akapihwa nehurongwa.
Kugamuchira invoice yekubhadhara, kana uchiisa odha, sarudza nzira yekubhadhara yezvinhu zviri pamutemo uye nyora zvakadzama zvesangano rako nenzira pfupi uye iyo system ichatumira invoice inogadzirwa otomatiki kukero yakatarwa yeemail:
Mushure mekugamuchira mubhadharo, iwe unogashira iyo SMS, email uye chiziviso muakaundi account yako kuti odha yacho yatorwa kuti ishandiswe.